Amantombazane amaningi ayakhathazeka, lapho ebona izithombe eduze Man, okumanje nesithakazelo kubo, ibhalwe ukuthi "intanethi", cabanga nje ngalokho ukubhala kuye. By the way, umbuzo ukuthi ungayiqala kanjani ingxoxo nge umfana , "VKontakte" kuyinto izilaleli ikakhulukazi nesithakazelo kusukela eminyakeni eyishumi nambili ukuba nesikhombisa ubudala, intsha isb. Ngokusho poll eziningi, abantu abangaphezu kweminyaka engu-nesikhombisa noma nesishiyagalombili kungcono ukuhlala kunokuba zokuxhumana ebonakalayo.
Kanjani ukuqala ingxoxo umfana, "In Touch", uma ungazi?
Mhlawumbe ubuka uhlu lwabangane kusuka omunye wabangane bakho, uthola iphrofayela ezithakazelisayo. Uyothola Yiqiniso, wayefuna ukuxoxa umnini wayo. Kodwa ke iqala ukuhlupha umbuzo ukuthi ungaqala kanjani ingxoxo umfana "ukuxhumana". Okokuqala udinga ukuba akwazi ukunqoba izingqinamba ukungalethembi, uma ikhona. Khumbula, uqala ingxoxo, une lutho ukulahlekelwa. Yiqiniso, insizwa wayithanda, awukwazi ukuphila ngokuvumelana okulindele, kodwa kungenzeka ukuthi une eziningi ezifanayo azithandayo. Ungaqala ingxoxo elula, "Sawubona!" Ngemva hhayi ukusebenzisa ibinzana banal "Uzizwa unjani?", Ukuze abuze ngomoya omuhle uma une nensizwa isikhathi sihambisana nawe.
Emva kokuthola impendulo ngoyebo, ungaphatha ngokugcwele isimo! Ngokwesibonelo, bheka umbhalo wakhe kanye uhlu abaculi abayizintandokazi zakho and bands. Vula vidiyo. Mhlawumbe kukhona lilondolozwe amamuvi ambalwa ukuthi ungakwazi ukuxoxa kungxoxo. Nakani indlela yomuntu inkulumo, ngizitshela ngakho uma efuna ukuqhubeka ukuxhumana.
Kanjani ukuqala ingxoxo "ukuxhumana", uma ungosemusha isivele ajwayelekile?
Mhlawumbe futhi ufunde / umsebenzi / njalo ukuvakashela umcimbi efanayo, ukuya ejimini. Kwamenywa ongakhetha, kodwa okushiwo kuyinto - obaziyo. Mhlawumbe ngezinye izikhathi ukukhulumisana empeleni noma nje Unqekuzisa ikhanda nomunye lokubingelela lolu. Qala nge-circuit, etholakala engxenyeni yokuqala ( "kanjani ukuqala ingxoxo umfana," In Touch ", uma ungazi?")
Njengoba umazi kancane, kufanele okungenani yokuzenzisa baqaphe yakhe ukwenza izinto zokuchitha isizungu kanye nezithakazelo. Lokhu lula kakhulu umsebenzi. Nalapha futhi, watch out for ngenkulumo yakhe. Uma akuphendule ngempoqo futhi imisho emifushane, cishe awufuni ukuxhumana. Kodwa uma umfana ngentshiseko aphendvule imibuto ebuzwa nguwe, noma, okungcono nakakhulu, libuza ukuthi yena, khona-ke konke kulungile.
Kanjani ukuqala ingxoxo "ukuxhumana" nesoka lakhe ngemva abantu belwa?
Basola enye ingxenye yakhe, silindele umlingani wokuqala step maqondana nokubuyiselwa ubudlelwane, kodwa ngesikhathi esifanayo ngokwabo abaziqhenyayo nabazazisayo. Kodwa kuthiwani uma intombazane lufuna ukwenza ukuthula, kodwa kunzima ukukhuluma nsizwa emhlanganweni, futhi akukho isifiso wayimemela emhlanganweni? Inketho engcono - ingxoxo kwi ukuxhumana nomphakathi. Ungakwazi ambhalele eside inhlamvu eyodwa noma nje kuholele engxoxweni evamile, uma uthanda. Namathela imithetho embalwa: Ungasebenzisi inhlamba, ukuchaza ngokucacile imicabango yakho Izimpikiswano kubo, ungayisebenzisi izitatimende nokhahlo maqondana abazana naye, abangane, izihlobo.
Futhi niyazi ukuthi zofuzo?
AEK-971. Izibhamu zokuhlasela. I-Automatic AEK-971